Doorashadda Gollaha Shacabka oo ku socoto Kuraas boob | KEYDMEDIA ENGLISH
Doorashadda Gollaha Shacabka oo ku socoto Kuraas boob
Madaxda Maamullada ayaa u dhaqmaya si mas'uuliyad darro ah, oo aan cadaalad ahayn, waxayna ka dhigteen doorashadda mid iyagu leeyihiin.
MUQDISHO, Soomaaliya - Boobka doorashadda kuraasta Baarlamaanka Soomaaliya waxay noqotay mid sii xoogeysanaysa, iyadoo taasi walaac ku beertay Beesha Caalamka.
Madaxda Maamullada si aan hufneen ayay u maareeyeen doorashadii Aqalka Sare, oo aan lagu tartamin, waxayna kusoo baxeen Senatarada qaab musuq-maasuq ah, oo loo xiray kuraasta.
Hadda waxaa la guda galay doorashadda Aqalka Hoose, oo sida ay ku billaabatey lamid ah tii Aqalka Sare. Xildhibaanadii hore, gaar ahaan kuwa saaxiibka la ah Madaxda Maamulada ayaa ku han-weyn inay soo laabtaan.
Bishan horaanteedii kuraasta Somaliland ee Aqalka Hoose ayaa labo kamid ah Muqdisho lagu doortay, waxay ahayd codbixinta natiiadeeda horey loo ogaa, waxaana boobey kuraasta Mahdi Guuleed iyo Musharax kale oo isaga uu watey.
Daahfurka doorashadda Aqalka Hoose ayaa sidaas ku billaabatey, waxaana la arkayaa liisaska kuraasta ay soo saareen Galmudug iyo Koonfur Galbeed inay iska cadahay cida loo wado.
Kuraasta lasoo saarey, laguma xusin magacyada Musharixiinta, waa qarsoodi lama oga, waxayna tani qeyb ka tahay daah-furnaansho la'aanta doorashadda socoto, oo la saadaaliyay inay ka musuq-maasuq badnaan doonto tii 2016.
Musharixiinta ayaa qoraal ay Khamiistii soo saareen ku sheegay in doorashadda socoto aysan ku qanacsanayn hanaankeeda, waxayna ku baaqeen codbixinta xor iyo xalaal ah oo loo dhan yahay. Madaxda Maamulada ayaa jeebka gashtay kuraasta, waxayna u kala baxeen Mucaarad kasoo horjeeda Farmaajo iyo kuwa taabacsan.
Rooble ayaa raba in Dec lagu soo gabagabeeyo doorashadda Gollaha Shacabka, oo 275 kursi ka kooban, waxaana hubaal ah in hadii 54 kursi oo Aqalka Sare ay saddex bilood qaadatey in middan taagan oo ergo lasoo xulayo ay waqti ka badan intaasi ku baxayso.